Ambohitsirohitra 7 Febroary 2018. Fahatsiarovana … tsy mendrika. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← « Ny mpitondra ankehitriny », Sedera Ravalison.
« Tsy mahafaly intsony », Dadan’i Zina. →
Ambohitsirohitra 7 Febroary 2018. Fahatsiarovana … tsy mendrika.
7 Febroary 2018: fahatsiarovana mbola nanehoana fifankahalana
Fanina tanteraka ny olompirenena malagasy manaraka ny fiainana ara-politika ampiharin’ny politisiana gasy indrindra nanomboka ny taona 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana teto. Nisy foana, ary tsy azo lavina fa niteraka disadisa teo amin’ireo mpifanandrina ara-politika hatrany ny fifandimbiasam-pahefana teto, indrindra fa taorian’ny hetsika nitarika ny fialàn’ny mpitondra tsy tamin’ny alàlan’ny fifidianana. Tsiahivina amin’izany ny taona 1972, 1991, 2002 ary ny 2009.
Ny telo voalohany dia nifarana tamin’ny fifanarahana ihany ny adilahy politika na dia azo lazaina fa nety ho tamin’ny fihatsarambelatsihy ihany aza. Ity farany izay tena fanonganam-panjakana satria tamin’ny alàlan’ny basy aman-tafondro mihitsy no nandrombahana ny fahefana dia ireo nanongana indray no mankahala ny nahongany. Ny tena mahavariana amin’ny gasy dia ny nanjanaka an’ity Nosy ity nandritra ny enimpolo taona mahery dia hisolelafana sy handadiladiana na dia amana hetsiny aza ireo raiamandreny mpiray tanindrazana naripany tamin’ny 1947.
Tsy midika velively izany fa tokony hankahalaina ny nanjanaka saingy tsy eken’ny fisainana kosa ny hoe samy Malagasy no mifankahala kanefa voaporofo fa tetika politika nentina niampangana an-dRavalomanana Marc no nitarihana ireo antokon’olona nanafika ny Lapam-panjakana etsy Ambohitsorohitra, mba hisy ny rà latsaka natao sorona.
Tsikaritra tokoa mantsy fa ireo rehetra nametraka fehezam-bonikazo teo dia tsy mba nisy na iray aza mba niezaka ny hamitra-pihavanana na namela ny heloky ny hafa. Tsy misy afaka miala amin’iny vono olona iny na iray aza satria Rajoelina Andry naniraka ny praiminisitra notendreny teny an-dalambe, Monja Roindefo, haka ny Lapan’Ambohitsorohitra. Ny filohan’ny AV7 ankehitriny dia na nosakanan’ny jeneraly Dolin tsy hihoatry ny tsipika aza dia tsy nanaiky fa niroso ihany. Ankehitriny dia nampiseho ny holatry ny nidiran’ny bala teo amin’ny tongony sy teo amin’ny lamosiny izy ary nanamafy fa avy ao Ambohitsorohitra ny tifitra. Nisy tovolahy nijoro vavolombelona toy izany koa.
Ny mpitarika antoko Mapar, minisitry ny fitsarana tamin’ny tetezamita, kosa dia mbola naneho ny fankahalany an-dRavalomanana Marc ka nilaza fa fitsarana mahefa no nitsara azy ka tokony hampiharina ny didim-pitsarana nivoaka tamin’ny taona 2010. Olona mpitsara izany tsy tokony hitanila ary azo antoka fa teny midina avy any aminy ny didy navoakan’ny fitsarana. Mahafantatra rahateo koa i Razanamahasoa Christine fa faritra mena Ambohitsorohitra ary na aiza na aiza eran’izao tontolo izao ka misy andian’olona manafika Lapam-panjakana izany dia tsy maintsy ireny no iafarany.
Ny mpanao gazetin’ny RFI tamin’ireny fotoana ireny dia nanamafy fa tsy avy tao Ambohitsorohitra ny tifitra ary ny namaranany ny fanadihadiany dia: “à qui profite le crime”. Ny tantara no namely izany satria voaporofo fa Rajoelina Andry sy ny ekipany no nikotrika iny hetsika iny ary izy ireo niakatra teo amin’ny fitondrana. Ny sekretera jeneralin’ny antoko Monima io 7 Febroary 2018 io, rehefa nanatitra fehezambonikazo teo Ambohitsorohitra dia nanamafy fa “manohy ny tolona” ny antokony tarihan’ny praiminisitra voalohan’ny tetezamita, Monja Roindefo. Tsy mazava loatra ny tiany hambara satria niaraha-nahalala fa fotoana fohy ihany ny filohan’ny Monima no nitazona io toerana io. Sarotra tokoa amin’izao fotoana izao ny mametraka mazava ny toerana misy ny antoko politika isan’isany satria sady miseho manenjika sy manakiana ny mpitondra amin’izao Repoblika IV izao kanefa mankahala ny mpitarika antoko hafa manohitra ihany koa. Araka izany dia tsy hisy hahatoky fa tsy hanambatra hery indray ireo politisiana manao adim-borontsiloza amin-dRavalomanana Marc ireo aoriana kely.
Aoka ho ao an-tsaina mandrakariva fa rehefa mahatsiaro ny 29 Martsa 1947 ny Malagasy dia tsy misy mandranitra fankahalana frantsay ka nahoana no isaky ny 7 Febroary dia miezaka manenjika ny mpiray tanindrazana ny politisiana gasy?
Ambohitsirohitra, 11 Febroary 2018.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué 7 Février 2009, 7 Fevrier 2018, Andry Rajoelina 2009, Monja Roindefo 2009. Ajoutez ce permalien à vos favoris.